प्रधानमन्त्री देउवाको अनुहार देख्दै ड्रग्स खाउँ जस्तो हुन्छ (भिडियोसहित) | नेपाल आज
Saturday 15 December 2018 | शनिबार, २९ मङि्सर २०७५
प्रधानमन्त्री देउवाको अनुहार देख्दै ड्रग्स खाउँ जस्तो हुन्छ (भिडियोसहित)
मङ्गलबार, ०५ मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर केशव स्थापित अहिले प्रदेश नम्बर ३ प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवार छन् । पूर्वमेयर स्थापितसँग सबैभन्दा बढी के छ भनेर सोधियो भने त्यो हो उनका योजनाहरु । यी योजनाहरु सुन्नेहरुका लागि मजाक जस्तो पनि लाग्न सक्छ । किनभने उनका योजना छन् नै अपत्यारिला जस्ता । नेपालआजसँगको पछिल्लो कुराकानीमा स्थापितले धेरै योजना सुनाए । उनीसँगको भिडियो अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले व्यक्त गरेका धारणाको मूल अंश निम्नानुसार छन्:
‘काठमाडौंका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले १०० दिनमा १०१ काम गर्ने भनेका थिए । तर त्यसमा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न दिएन । केही कानुन नबनेर काममा बाधा भयो । उदाहरणका रुपमा घरजग्गा कर स्थानीय सरकारले उठाउने भनेको हो । तर अर्थमन्त्रालयले मानेन । विवाद भयो । २ अर्ब रोकियो । २ अर्ब भएको भए सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइ सक्थ्यौं । यही भएर सर्वसाधारणलाई केही काम भएन भन्ने लागेको छ । त्यो १०१ मैले नै ड्राफ्ट गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले धोका दिएर मात्रै हो नत्र अहिलेसम्म विद्या सुन्दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार बाँढीसक्ने थिए । अब हेर्दै गर्नुहोस आउँदो दशैसम्म यो काठमाडौको मुहार नै फेरिने छ । उदाहरणका लागि केशर महललाई लिउँ न । भित्र कति राम्रो छ । बाही बाक्लो पर्खाल छ । भित्रको बाहिरबाट देखिँदैन । हिजो राणा शासनमा पो भित्र व्यभिचार गर्न पर्खाल लगाए त ।
अब त गणतन्त्रमा त्यो पर्खाल भत्काएर पाइपको पारदर्शी बेरा लगाउने हो । त्यस्तो पाइपमा म्युजिकल जोडेर संगीतमय बनाउनु पर्छ । सेन्सर जोडेर त्यहाँ अटोमेटिक धुन बज्ने बनाउने र कुनै दिन आनी छोइङको गीत सुन्ने हो । त्यस्ता पाँच सय वटा स्थान मैले चिन्ह लगाएर राखेको छु । त्यो अब बनाउनु पर्छ । जहाँ हेर्दा पनि गार्डेन, जहाँ पनि भव्य महल बनाउनु पर्छ । त्यति भएपछि पर्यटक कति आउँछन् । सुन्दर ठाउँमा प्रमी प्रेमीका कति रमाउँछन् होला ।
अबको केही दिनपछि चुनावपछि चाँडै काम देखिनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचन फरक हो ।
अहिले म निर्वाचनका लागि मतदाता कहाँ पुगेको छु । अधिनायकवाद भनेर कसैले भनेको छैन । मेरो क्षेत्रमा हामी भिमसेन दासलाई जित्छौं ।
राम्रो काम गर्नका लागि १० हजार मानिस मलाई चाहिएको छ । योग्य मानिस । जसले यो देशको मुहार फेर्न सक्छ । मान्छे कांग्रेस होस कि कम्युनिष्ट होस मतलव छैन । कुनै बेला महामण्डले कमल थापाको भाई अझै कडा मण्डले गणेश थापालाई फुटबलमा ल्याएँ । उ मण्डले भए पनि फुटबलमा योगदान दिन सक्छ भनेर ल्याएको हो नी त । एन्फाको अध्यक्ष पनि बनाएँ । उनी राप्रपा हुन् कि जे हुन् मलाई मतलव भएन ।
नेपालमा पनि अब ‘बिग ब्याङ’ हुनेवाला छ । त्यो विग ब्याङको आवाज मैले सुनिसकेको छु । जसरी चराचुरुंगीले भूकम्प आउनु अघि थाहा पाउँछन्, मैले पनि अबको एक दुई महिनामा भयंकर ठूलो परिवर्तन आउँदैछ भन्ने भित्रभित्रै मैले आवाज सुनिसकेको छु । ममा यस्ता अदभूत सेन्स कसरी आयो थाहा छैन । तर आयो । अहिले माओवादीका नेता कार्यकर्ताको अनुहारमा चाउरिएको छाला अहिले फुकिसकेको छ । उनीहरुको अनुहारमा चमक छ । एमालेसँग मिलेपछि उनीहरुमा जित्ने मनोवल उठेको छ । अहिले मैले झक्कु सुवेदीलाई जिताउन लागि परेको छु । प्रचार कसरी गर्ने, अरुका कमजोरीलाई कसरी उछाल्ने भन्ने मैले योजना बनाइरहेको छु । काम गरिरहेको छु ।
काठमाडौंका प्रत्येक वडामा एउटा सहरी सेवा केन्द्र खोल्ने योजना छ । यसमा खरबौं लाग्छ । केशव स्थापित लाख करोडको कुरा गर्ने मान्छे पनि होइन । यस्ता केन्द्र खोलेपछि सुरुमा खर्च हुन्छ । पछि पैसा आउँछ मात्रै । एकीकृत र ठूलो भवन बनाउने । सबै सुविधा त्यसैमा दिने योजना छ मेरो । अब स्कुल, स्वास्थ्य अब एउटा कुपनको माध्यमबाट हुनेछ । अस्पतालमा पुर्जा काट्ने दिन गए । म त्यस्तो भवन बनाउनु पर्छ ।
काठमाडौंमा हेर्नुस त अहिले पिसाब फेर्ने सार्वजनिक शौचालय पनि छैन । अनि मान्छेले सार्वजनिक स्थानमा पिसाब नफेरे के गर्छ ?
काभ्रेको जनागाल पारि ३ हजार रोपनी जमिन छ । त्यो हाम्रो भोलिको ‘हलिउड’ हो । त्यहाँ फिल्मी सिटी बनाउने योजना छ । यस्तो स्थान बन्ने छ कि संसारभरका सिनेमा बनाउनेहरुको त्यो तिर्थस्थल जस्तो हुनेछ । मसँग त्यस्तो भिजन छ । त्यसकालागि मसँग एक जना विमल सुवेदी हुनुहुन्छ । उहाँले फिल्म मेकिगमा एमफिल गर्नुभएको छ । उहाँलाई हिराको पहाड भन्ने गरिन्छ, फिल्म क्षेत्रमा । त्यो स्थानमा फिल्मको विश्वकेन्द्र बनाउने योजना छ । अहिले पनि त्यो स्थानमा चालीस देशका मानिसहरुले चासो राखिसकेका छन् ।
राजा वीरेन्द्रलाई उनी राजा नै भइसकेपछि बीसौं पटक भेटेको छु । असहज परिस्थितिमा पनि भेटेको छु । राजाले मलाई भन्थे कि उनको विवाहमा हात्तीमा चढेर वशन्तपुर जाँदा न्युरोड गेटमा शिर निहुर्याउनु पर्यो । उनले आफूले सलाईको बट्टाको राजा भएको बताउँथे ।
राजा वीरेन्द्रले मदिरा पिइरहेको बेला म धेरै पटक पुगेको छु । राजा वीरेन्द्रसँग संगै लसुन छोडाएको छु । सँगै मःमः पकाएको छु । रानी ऐश्वर्यले अप्ठ्यारो पारेको उनले भन्ने गर्थे । दरबारमा भोज हुँदा रानी ऐश्वर्यले फ्रिजमा भएको अन्डा कतिवटा खर्च भयो गणना गर्थिन । रक्सी कति पिइयो भनेर चिन्ह लगाउँथिन । कर्मचारीले गडबडी गरे कि भनेर उनी शंका गर्थिन । यो कुरा मलाई सनुाएर राजा वीरेन्द्र मेरो अगाडि रोएका छन् ।
राजाले यस्तो गुनासो गरेपछि राजतन्त्रले काम गर्दैन भन्ने स्पष्ट पारिसकेको थियो ।
दरबार हत्याकाण्डको सात दिन अगाडि एक दिन दरबारबाट फोन आयो । आकाश भैरव आउनु भन्ने खबर थियो । म पुगे । राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य पनि पुगेका रहेछन् । राजा फाटेको जुत्ता, मैले घरकै कपडामा पुगेका रहेछन् । टोपी पनि लगाएका थिएनन् । उनी मुटुका बिरामी थिए । आकाश भैरवको जानै नसिकने माथिल्लो तलामा उनी जान्छु भन्न थाले । मैले छेके । तर उहाँले पछि हेर्न पाउँदिन भने । त्यसबाट मैले पछि थापाएँ कि दरबार हत्याकाण्ड हुँदैछ भन्ने घटनाक्रमहरुले छनक दिइरहेका रहेछन् ।
यो युगको चेतना नबुझेको, युगको प्रवाह नबुझेको व्यक्ति शेरबहादुर देउवालाई हामीले प्रधानमन्त्री मान्नु परिरहेको छ । माइतीघर मण्डला बनाउने तम्सिएँ । जग्गा अधिग्रहण गर्न सिडिओ र क्याविनेटले निर्णय गर्नु पर्ने थियो । देउवा प्रधानमन्त्री थिएँ । उनीकहाँ गएँ । आफ्नो कुरा राखे । उनि उनले त भने, ‘कहाँ यो टेबलमा निर्माणको कुरा गरेको ? यो टेबल त सुरक्षाको हो ।’
अब मलाई के थाहा निर्माणको टेबल बेग्लै, सुरक्षाको टेबल बेग्लै हुन्छ भन्ने । अर्को टेबलमा गइयो । अनि उनले भने कि यो देश सतिले सरापेको देश हो । यहाँ विकास गर्न गाह्रो छ । दिस इज नेपाल । २२ वटा घर १८ दिनमा हटाएर माइतीघर मण्डला बनाउन सम्भव छैन । बुझ्नु भो मेयर जी । ’
उहाँले चार वर्ष लाग्ने बताउनु भयो । त्यही बेला आरजु देउवा आउनु भयो । मैले दृेउवालाई इंगित गर्दै आरजुलाई भनेँ, ‘भाभीजी तपाईको हिरो भनेको त जिरो रैछ ।’
अनि मेरो कुरा सुनेपछि आरजुले देउवालाई भनिन् कि ‘ए राजा हुन्छ भनिस्यो न । केशवले गर्छ ।’ अनि मैले थाहा पाएँ यो राजनीति कताबाट निर्देशीत छ भन्ने । देउवाको खप्परमा दिमाग होइन गोबर नै भएको भए पनि फूल फुल्थ्यो होला नी । खै रहेन छ ।
फेरि दिउँसो मलाई फोन गरेर भन्छन् कि त्यो काम त नहुने भयो । मैले अनि भने ‘तपाई शेरबहादुर कि बिरालोबहादुर ? शेर जस्तो भएर त्यहाँ निर्णय ठोक्नुस ।’ ४० को दशकको सोच भएका हुन शेरबहादुर । अब नेपाली कांग्रेसले पाएको यो नै अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् । अब नेपाली कांग्रेसको बेला सकियो ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री आफ्नो बोली आफै बुझ्दैनन् । भाषण गर्न भनेर कोटको गोजीबाट निकालेको कागज तरकारीको सूची हुन्छ । उनी त्यति पनि थाहा पाउँदैनन् । काउली २ केजी, टमाटर १ केजी, धनीया एक मुठा भन्ने नै वाचन गरिदिन्छन् । यस्ता त छन् प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री देउवाको अनुहार देख्दै ड्रग्स खाउँ जस्तो हुन्छ ।
रारा तालको पानी छुन सकिँदैन । त्यति चिसो छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरु पौडी खेल्छन् । स्वीमिङको विश्व प्रतिस्पर्धा त्यही गराउँनु पर्छ । संसारभरका पौडीवाजहरु आउँछन् । त्यहीँ हाम्रो देशका स्थानीयलाई पनि भाग लिन लगाउने । अरु देशका मानिसहरु हाम्फाल्ने बित्तिकै ‘मसल क्र्याक’ भइहाल्छ । जित्ने त हामीले नै हो । अनि भएन ? गोल्ड मेडल जति सबै हाम्रै ।
विवेकशील साझा पार्टीको अभियान व्यर्थ प्रयत्न हो । हिजोको उहाँहरुको सबै अभियानको स्रोत के हो ? एमालेको स्रोत सबै सफा छ । विवेकशील साझाको स्रोत कसैलाई थाहा छैन । एनजिओ, आइएनजिओ चलाए जस्तो हो र देश चलाउने ? हामी जेल बस्यौं, कर्णाली गयौं, भारी बोक्यौं । शरीरभर जुम्रा परे । त्यो कुरा उहाँहरुलाई थाहै छैन । हामीले पैतालमा फोका उठाएका छौं । त्यो कुरा उहाँहरुलाई थाहा छ ? बेलायतमा बस्ने, रेडियोमा फुक्ने गरेको मान्छेलाई यो देश केही थाहा हुँदैन । हामीले नबुझ्ने शब्दावली लिएर हामीलाई प्रहार गर्न आउने ? कमाउने सबै ठाउँमा कमाइसकेपछि अब यताबाट पनि कमाउन आएका हुन् ।
मोनिका बन्न मनोजले झेलेको महाभारत (भिडियोसहित)
सोमबार, १० जेठ २०७३
व्यवसायिक पत्रकारहको आवश्यकता (Vacancy)
खोरेत रोग फैलियो, किसान चिन्तित
प्रधानन्यायाधीश मिश्रद्वारा आफ्नै इजलासबाट शंकास्पद फैसला
राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षे पछाडी हट्ने
६ वर्षपछि कांग्रेस महासमिति बैठक बस्दै
कृषि विश्वविद्यालयले थप दुई आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने
मित्र राष्ट्र पाकिस्तानसँग लड्न नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्नु गलत (भिडियोसहित)
‘युनिर्भसल पिस फिडेरेसन’ ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको सुशासन पदक सत्तामाथिकै व्यंग्य
मदमा मस्त भएर नाच्नेहरुलाई जसले दिए मीठो सिर्जना (भिडियोसहित)
‘सारा दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा, जनकपुरमा ज्ञानको गंगा बग्थ्यो’—मुख्यमन्त्री योगी (फोटो फिचरसहित)